Ma fududahay in Trump xilka laga qaado? - BBC News Somali
Ma fududahay in Trump xilka laga qaado?
10 Nofembar 2019
In dhawaale dalka Mareykanka waxaa ka socday dedaallo inta badan ay wadaan xubnaha xisbiga Dimuquraadiga oo lagu doonayo in xilka looga xayuubiyo madaxweyne Donald Trump.
13-ka bishan ayaa la filayaa in uu billowdo dhageysiga dacwadda la doonayo in si rasmi ah xil ka qaadis loogu sameeyo madaxweyne Trump.
Xildhibaanno 200 ku dhaw oo dacwad ka gudbiyay Trump
Trump oo ka digay dacwad lagu soo oogo
Lahaanshaha sawirka Empics
Ugu horreyn, xildhibaannada aqalka wakiillada ayaa eegaya caddeymaha ka dhanka ah madaxweynaha, ka dibna waxay go'aan ka gaarayaan in la sii wado dacwadda madaxweynaha ama ay markiiba soo jeediyaan in la marsiiyo sharciga xil ka qaadista.
Balse aqalka Sare ee baarlamaanka ayay tahay mas'uuliyaddiisu in uu dacwaddaasi qaado. Haddii wax dambi lagu helo madaxweynaha isla markiiba waxaa laga xayuubinayaa xilka waxaana madaxweyne loo magacaabayaa kuxigeenkiisa.
Waa imisa tirada madaxweyneyaashii hore ee Mareykanka ee xilka laga xayuubiyay?
Andrew Johnson (1868) iyo Bill Clinton (1998) ayaa labaduba lagu soo oogay dacwadda xil ka qaadis ah balse labaduba aqalka sare ee baarlamaanka ayaa badbaadiyay.
Sanadkii 1974 ayaa madaxweyne Richard Nixon waxaa lagu helay dambi ah in uu basaasay musharrixiintii la tartamayay, waxaana soo baxday fadeecaddii la magac baxday Watergate - balse markiina xilka ayuu ka degay, waayo waxa uu ogaa in aqalka wakiillada uu dacwad ku soo oogi doono ka dibna aqalka sare uu xil ka qadis ku sameyn doono.
Ka warran Trump - maxaa loo haystaa?
Madaxweyne Donald Trump ayaa lagu eedeynayaa in uu ku tagrifalay awooddiisa madaxweyne isla markaana uu adeegsaday siyaasad qaab daran oo uu ku xoojinayo sidii mar kale loo soo dooran lahaa sanadka dambe.
Waxaa lagu eedeynayaa in cadaadis uu ku saaray dhiggiisa dalka Ukraine, Volodymyr Zelensky, in uu fadeexeeyo qoyska Joe Biden oo ahaan jiray madaxweyne ku xigeenkii Barack Obama, haatanna la filayo in uu doorashada 2020-ka kula tartamo madaxweyne Trump.
Marka miyuu Trump sharciga jebiyay?
Dadka oo dhan iskuma waafaqsana in madaxweynuhu uu xil ka qaadis ku muteysanayo in hoggaamiye shisheeye uu ka codsado in uu ceebeeyo nin tartan kula jira. Madaxweyne Trump ayaa sheegaya in uusan geysan wax dambi ah, waxa uuna dacwaddiisa xil ka qaadista ku tilmamay mid aan miisaanayn oo halis ah. Aqalka Cad ee laga xukumo Mareykanka ayaa sheegaya in uusan wax wada shaqeyn ah baarlamaanka kala yeelan doonin dacwaddaasi ka dhanka ah madaxweyne Trump.
Balse Trump ayaa mashaakil gunta u galay tan iyo markii qof xog ogaal ah u ah arrimihiisa uu shaaciyay macluumaad ku saabsan wadahadal qadka taleefoonka ku dhex maray madaxweyne Trump iyo dhiggiisa Ukraine Zelensky, 25-kii bishii Luuliyo ee sanadkan.
Trump ayaa hakiyay malaayiin doollar oo uu ku kaalmeyn jiray milatariga dalka Ukraine, waxaana afar mas'uul ay sheegeen in madaxweynuhu uu wacad ku maray in uusan lacagtaasi bixinayn ilaa Ukraine ay baaritaan ku billowdo ninka laga yaabo in uu doorashada dambe kula tartamo ee Joe Biden. Balse Aqalka Cad ee Mareykanka looga arrimiyo ayaa arrintaasi beeniyay.
Maxaa xigi doono?
Kooxo guddiyo ah oo ka tirsan xildhibaanka ayaa billaabi doono baaritaanno. Guddi kastaa waxa uu ku takhasusay arrimo laga yaabo in ay xiriir la leeyihiin dawcaddan. Tusaale ahaan, guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka, kan maaliyadda iyo kan caddaaladda. Waxay guddiyadani sidoo kale soo bandhigi doonaan dadka ku markhaati furaya madaxweynaha.
Qareennada u doodaya madaxweynaha ayaa sidoo kale goobjoog ka ahaan doono dhageysiga dacwaddaasi.
Haddii guddiyadaasi baarlamaanku ay go'aansadaan in madaxweynuhu uu wajaho dacwad, waxaa arrintaasi cod u qaadaya dhammaan xubnaha baarlamaanka.
Suurtagal ma tahay in xil ka qaadis lagu sameeyo Trump?
In xil ka qaadis lagu sameeyo Trump waxaa loo baahan yahay oo kaliya cod hal dheeri ah. Maadaama xisbiga mucaaradka ah ee Dimuquraadiga uu aqlabiyad buuxda ku yeelahay aqalka wakiillada, waxaa suurtagal ah in Trump xil ka qaadis lagu sameeyo.
Shakhsiyaadka ugu saameynta badan gudaha xisbiga Dimuquraadiga ayaa sheegaya in ay doonayaan in Trump cod loo qaado ka hor inta uusan dhammaan sanadkan.
Marka suurtagal ma tahay in Trump uu sidaa xilkiisa ku waayo?
Sidaa uma sahlana, waayo xisbigiisa Jamhuuriga ayaa 53 xubnood ku leh aqalka Sare ee Senedka oo ka kooban 100 xildhibaan. Sidaa awgeed, waxaa loo baahan yahay saddex meelood meel guud ahaan tirada xildhibaannada aqalka Sare si rasmiyan xil ka qaadis lagu sameeyo Trump.
Marka ilaa qiyaastii 20 ka mid ah xildhibaannada xisbigiisa Jamhuurigu ay ka taageeryaan xil ka qaadistaasi, Trump ayaa sii ahaan doono madaxweynaha Mareykanka ilaa doorashada dambe. Ilaa iyo haatanna xildhibaannada xisbigiisu daacad ayay u yihiin.
Haddaba maxay soo kordhineysaa dacwaddani xil ka qaadista?
Taageerayaasha madaxweyne Trump ayaa rumeysan in mucaaradku ay doonayaan in ay wiiqaan sumcadda iyo shacbiyadda Trump ka hor xilliga xilliga doorashada ee sanadka dambe. Dacwaddan xil ka qaadista ahi ayaa siyaasad ahaan dhaawac weyn ku ah sumacadda Trump.
Trump oo ah hantiile siyaasi isu badalay ayaa tan iyo markii uu xilka qabtay waxaa haystay caqado dhanka sharciga ah. Tusaale ahaan, waxaa in muddo ah ku socday baaritaan ku aadan xiriir la sheegay in uu la leeyahay dowladda Ruushka, diidmada uu diiday in uu shaaciyo dukumeentiyadiisa canshuur celinta iyo lacago la sheegay in uu siiyay laba gabdhood oo la sheegay in uu xiriir la lahaa.
Eedeynta ah in Trump uu cadaadis saaray madaxweynaha Ukraine, si uu u fadeexeeyo Biden ayaa culeyska ku sii kordhin doonto Trump.
Balse dacwaddan xil ka qaadista ayaa sidoo kale halis ku noqon karta mucaaradka qudhiisa, taa oo ka dhigan in deegaannada Jamhuurigu ku badan yahay ay cod ka waayaan musharraxiinta Dimuquraadiga marka la gaaro doorashada soo socota.